I-Ultrasonically Isizwe Draw-Peeling of Wire Rods (UADP) - Hielscher Ultrasound Technology
Ukudweba kwezintambo zezintambo kuthuthukisa ikhwalithi yangaphezulu ngokubheka izinto ezibonakalayo kusuka kwendawo yangaphandle yezinto ezibonakalayo. Kungenye indlela eyaziwa kakhulu ejikelezayo-ukukhipha, ukuchithwa noma ukugaya. I-Ultrasonically yasiza ukudweba ukusebenzisa i-vibration high-frequency ye-ithuluzi lokupenda. Ukunyakaza kwe-speed longitudinal ye-ithuluzi lokuhlunga kunciphisa amandla okudweba futhi kuthuthukise ikhwalithi yezinto ezibonakalayo.
Ikhwalithi yangaphezulu ephezulu yesimo esincane kakhulu esiphezulu yinjongo enkulu yenqubo yokudweba. Ngemuva kwe-draw-peeling, induku yensimbi inesakhiwo somzimba esiyinkimbinkimbi futhi ihlanzekile. Ukudweba-ukukhipha kususa iziphambeko ezingaphezulu, njenge-oxidation, amanothi okuxoxa, ama-roll scores, izikali zesilinganiso, izikhumba ezimbili, ukugqokisa, ukufaka izifungo kanye nezendwangu zokumaketha ezikhonjisiwe ezinsimbi zensimbi njengensimbi noma izinto zensimbi. Ukusebenza okuvelele kokudweba ukukhipha imfucuza ukukhishwa kwesibhakabhaka nesibhakabhaka kusuka kumcibisholo wensimbi ofayo. Izinsimbi ezingezona ezensimbi, ezifana nethusi, zingenza ukudweba-kubonakala kudingekile ukususa izingqimba zomzimba eziqinile ngemva kokugoqa noma ukudweba. Inqubo yokudweba iyakwazi ukususa phakathi kuka-0.01mm no-0.25mm wezinto ezivela emgqeni wensimbi ngesinyathelo esisodwa. Ukudweba-ukukhwabanisa kwaziwa nangokuthi ukushefa, ukukhwasa noma ukusika ukufa.
Dweba-Ukulinganisa Vs. I-Rotary-Ukubheka
Ngama-wire rod, amaphrofayili noma amashubhu angaphansi kuka-25mm ububanzi, ukudweba-kuncike kunezinzuzo ezinkulu ngaphezu kwe-Rotary-peeling. I-rotary-ukuboniswa kwezintambo zezintambo kunciphisa isivinini sokukhiqiza futhi ingabangela ukuguqulwa noma ukuvuthisa izindawo ezihleliwe ezintambo ezincane zocingo. Ithuluzi lokusika lokudweba elihambisana ne-directional feed. Lokhu kuholela ekugqibeleni kwezinto eziphezulu ezingaphezulu kwenduku yocingo kanye nokuqina okungaphezulu kwethuluzi lokudweba. Ngokuvamile, izindleko zamathuluzi okudweba aphansi kunezinhlelo zokujikeleza.
Iyini Inzuzo Ye-Ultrasonically Assisted Draw-Peeling (UADP) Esizayo?
Ukudweba kwezindonga zocingo kudinga amandla ukunqoba ukuqubuzana nokunquma ukwaziswa. Esikhathini esivamile sokudweba-ukukhipha, le mandla ivela e-capstan ejikelezayo, kuphela. Amandla okugxila kwenduku yocingo iphakama ngesivinini esisheshayo ngokushesha, ububanzi bezintambo nokulinganisa ububanzi besendlalelo. Amandla amakhulu nokunika amandla yizici ezibalulekile ikakhulukazi ezintambo ezincane zocingo, njengoba isilinganiso sesigamu sokuhamba kwesigaba siphezulu ngamaditha amancane. Lokhu kunciphisa isivinini somugqa we-draw-peeling noma kwenza ukudweba okujwayelekile kungenzeki ngenxa yengozi enkulu yezinhlanzi.
Ultrasonically basiza draw-peeling isebenzisa imvamisa high longitudinal vibration we ocijile ohlangene ithuluzi yokusika. Imvamisa evamile yokudlidliza ingama-20kHz, ukufuduka kokuqothula kwempumalanga kungaba yi-100 micron (pk-pk). Ukuphakama kwesilinganiso phakathi kwethuluzi lokubheka ukuzulazula kanye nejubane lensimbi yensimbi, okungezansi kungaba amandla amakhulu phezu kwentambo. Ngakho-ke i-ultrasonically inikwe amandla ukudweba-i-peeling ivumela ukuvinjelwa kwe-line okusheshayo okudweba noma ukukhishwa kwezinto ezibonakalayo kwisinyathelo esisodwa sokulinganisa kunoma yikuphi ukunikeza umkhawulo wamandla okuqina. Ukunciphisa amandla okugcoba kwenza i-ultrasonically inikwe amandla ukudweba-ebonakala kahle kakhulu ezincane zezinto ezibonakalayo kanye nezimpande ezingenalutho, njengezilimo eziyizigaxa.
Izintambo zensimbi zijwayele ukumaka izingxoxo kanye nezingxenyana lapho uqala futhi umisa i-capstan drive. Lokhu kuyinkinga kakhulu ezintweni ezithambile noma ezithambile kakhulu nezigaba ezincane. I-ultrasonically vibrated peeling ithuluzi lihamba emuva nangaphandle izikhathi ezingu-20,000 ngomzuzwana. Lokhu kuhamba okuqhubekayo kwe-shaving kufa kunciphisa ukucindezeleka kokucindezeleka futhi kugwema amanxeba okuxoxa kanye nezibhamu eceleni kwenduku yentambo.
Uma i-vibration ye-ultrasonic igxila kakhulu ekutheni ithuluzi lokusika lifinyelele ekubambeni, okuphansi kungase kube ukushaywa kwenduku yentambo. Lokhu kuholela ekunciphiseni okukhulu kokuncipha kwamaphesenti angu-50 kuye ngokuthi izinto nezinto ezilinganiselwe. Ngokuvamile, ukunciphisa ukushayisana kuvulwa ithuba lokunyusa isivinini somugqa. Noma kunjalo, isivinini sensimbi yentambo kufanele sibe okungenani 20% ngaphansi kwesisindo sokuzulazula sethuluzi.
Yini Edingekayo Ukuze I-Ultrasonically Assisted Draw-Peeling?
I-UADP isebenzisa ithuluzi lakho elijwayelekile lokupenda / ukushefa. I-resonator yama-ultrasonic – owaziwa ngokuthi i-sonotrode – ithatha indawo yomnikazi wethombi evamile. Le sonotrode iyindlela entsha ekhethekile ye-Hielscher Ultrasonics. Idlulisa izidakamizwa ze-ultrasonic longitudinal ngempumelelo phezu kwethuluzi lokuhlunga. Ukuze ulondoloze isikhala sokufaka, umshayeli we-ultrasonic – futhi owaziwa ngokuthi i-transducer – ivuselela i-sonotrode kusuka phezulu. Ukusetha okujwayelekile kwe-UADP kudinga ngaphansi kwama-250mm ekuqondeni kwesikhathi eside.
Izidakamizwa ze-ultrasonic zenziwa ngamadivayisi ethu ajwayelekile we-ultrasonic, njenge: UIP1000hdT (1.0kW), UIP1500hdT (1.5kW), UIP2000hdT (2.0kW) noma i-UIP4000 (4.0kW). Lezi zinyunyana ziqhuba izinqubo ezihlukahlukene emisebenzini engu-24h / 7d emhlabeni jikelele. Imfuneko yangempela yamandla incike ekuvinjeni komugqa, impahla kanye nobukhulu. Amadivaysi e-ultrasonic aguquguqukayo, uma intuthuko ejubane lomugqa yenza amandla engeziwe ayadingeka. Mayelana nezinsiza eziphezulu zamandla, singashayela ithuluzi lokuhlunga ngamadivaysi amabili e-ultrasonic ngesikhathi esisodwa (kufika ku-2 x 4kW).
Ungaphinda uvuselele noma yimiphi imishini ekhona yokudweba nge-ultrasonic system kalula. Abakhiqizi abaningi bemishini, njenge I-Kieselstein (eJalimane) bajwayele ukufakwa noma i-retrofit isebenzisa uhlelo lwethu. Enye yemishini emisha inesibalo esinikezwe uhlelo lwe-ultrasonic retrofit.
Sicela uxhumane nathi ukuze uthole olunye ulwazi!
Sicela usitshele mayelana nezidingo zakho zokudweba. Sizojabula ukusebenza nawe ukuhlanganisa ama-ultrasonics ohlelweni lwakho nomshini. Sicela ucacise izinto, isivinini somugqa, ukushayisana, umkhawulo wezinkinga kanye namaditha. Iyini injongo yakho yenqubo? Singakwazi ukugijima ukuhlolwa kwe-draw-peeling ngento yakho kwisistimu eyodwa yokudweba-esiteji.
Kukhona izinqubo eziningi zezinsimbi zensimbi
Ezinye izinhlelo ze-ultrasonically ezusizwa ucingo lokucubungula zifaka:
I-Ultrasonically Assisted Draw-Cleaning (UADC)
Ukuhlanzwa kwezingcingo ze-Ultrasonic, Amapayipi namaphrofayela
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic ye-Wire Dies ne-Extrusion Guide
I-Surface Roughness Parameters: Ra, Rz, Rt
URa ipharamitha yobunzima bomhlaba. Kuyinto incazelo ye-arithmetic yokuphambuka kwephrofayili kusuka kumugqa oqondile. Kubalwa njengenzuzo yomphumela wokulinganisa okulandelanayo okulandelanayo. I-Rz ipharamitha yokuphakama kwe-ISO 10-point for uroughness surface. It kulinganiswa phezu ubude sampuli. Yikho isilinganiso sokuphakama kwesilinganiso sokubalwa phakathi kwezintaba eziphakeme eziyisihlanu nezintaba ezinhlanu eziphansi kunazo zonke ngaphakathi kwesilinganiso sesampula. Rt yisilinganiso esiphakeme sokuphakama kwesigodi kuya kwesilinganiso sesampula. Ngokuvamile kunqunywa njengo-Rtm ophakathi kwezilinganiso eziyisihlanu zokulandelana.